यो मरेकोबाट तपाईंको RSS फिड उठाउने समय हो Martech Zone
यो मरेकोबाट तपाईंको RSS फिड उठाउने समय हो
लोकप्रिय विश्वासको विपरीत, फीड अझै अझै इन्टरनेटको अनुहारमा रोमि are गर्दै छन् ... वा कम्तिमा यसको अंडरवर्ल्ड। सामग्री सिन्डिकेशन अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरूले फिड रिडर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू भन्दा बढी प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ ... तर तपाईंको सामग्री वितरण गरिएको र उपकरणहरूमा उत्कृष्ट देखिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने अवसर अझै सामग्री रणनीतिहरूको लागि प्लस हो।
नोट: यदि तपाईं हराउनुहुन्छ भने - यहाँ एक लेख छ आरएसएस फिड के हो.
म पुरानो फिडबर्नर खाता हेर्दा म छक्क परें कि त्यहाँ अझै 9,000, ०००+ प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले प्रत्येक दिन हाम्रो फिडमार्फत हाम्रो सामग्री हेरिरहेका थिए ... वाह! र जब मैले अन्य साइटहरू हेर्न शुरू गरें, उनीहरूसँग केहि ब्लगमा ,50,000०,०००+ पाठकहरू थिए। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामीले वर्डप्रेसको प्रयोग गरेर मृतबाट हाम्रो आरएसएस फिड बढाउन गर्यौं।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग छ पोष्ट थम्बनेल सक्षम तपाइँको साइटमा र आवश्यक ट्यागिंग थप्नुहोस् ता कि तपाइँको लेखहरूमा एक चित्रित छवि छ। यो प्रयोग गरेर WordPress द्वारा सम्भव छ SB RSS फिड प्लस प्लगइन WordPress को लागी वा तपाइँ आफ्नै कार्य लेख्न सक्नुहुन्छ।
कार्यान्वयन गर्नुहोस् फिडप्रेस ताकि तपाईं ट्रयाक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको फिड खपत र मापन-क्लिक दर मार्फत, तपाईंको फिड URL लाई अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको फिडलाई तपाईंको सामाजिक च्यानलहरूमा धक्का दिन सक्नुहुन्छ।
कपीराइट ब्लब थप्नुहोस् वा तपाईंको फिडको आधारमा एक्शनमा कल गर्नुहोस् WordPress SEO प्लगइन। हामी मान्छेहरू लाई सबै पटक हाम्रो फिड चोर्ने र पुनः प्रकाशित गर्ने समात्छौं र तिनीहरूले हाम्रो प्रकाशनलाई राख्नको लागि यिनीहरूको प्रतिलिपि राख्न यथेष्ट गू d्गो हुन्छन्।
तपाईंको फिड ठेगाना तपाईंको मेनूमा थप्नुहोस् र यसलाई तपाईंको साइटमा राख्नुहोस् RSS फिडहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीकको प्रयोग गरेर।
हेड ट्यागको बिच तपाईको विषयवस्तुमा आवश्यक हेडर ट्यागहरू थप्नुहोस् जसले गर्दा अनुप्रयोगहरू र ब्राउजरहरूले तपाईंको फिड ठेगाना फेला पार्दछन्, यहाँ हाम्रो फिड ठेगानाको लागि कोड छ।
फिडबर्नरलाई मार्नुहोस् र फीडप्रेसलाई जीवनमा ल्याउनुहोस्:
हामीले फिडबर्नरलाई पिच्छे र लागू गरेका छौं फिडप्रेस हाम्रो साइट मा। यो पूर्ण फिचर फीड एनालिटिक्स प्लेटफर्म हो केही केहि बढि थप सुविधाहरू सहित तपाईंको फिड CNAME गर्न सक्ने क्षमता ताकि तपाईं त्यस पुरानोमा निर्भर हुनुहुन्न। फिडबर्नर URL त्यसो भए मसँग सबडोमेन छ https://feed.martech.zone हाम्रो फिड को लागी सेट गर्नुहोस्!
तपाइँको साइटलाई रूपान्तरण गर्ने तरीका यहाँ छ फिडप्रेस:
फिड प्रेससँग अन्य विकल्पहरूको एक टन छ तपाईको फिडलाई अनुकूलन गर्न र अनुकूलन गर्न:
सामाजिक मीडिया प्रकाशन - FeedPress पनि एक अविश्वसनीय छ सामाजिक मिडिया एकीकरण जहाँ तपाईं स्वचालित रूपमा तपाईंको सबै सोशल मीडिया खाताहरूमा सबै नयाँ प्रकाशित सामग्री प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।
फिड ट्र्याकिंग - उन्नत र सही रिपोर्टिंग तपाईंसँग कति ग्राहकहरू छन्, कहाँ छन्, र ती सदस्यहरूले तपाईंको फिड खपत कसरी गर्दछन्।
ईमेल न्यूजलेटर - १००० सदस्य वा कमका लागि नि: शुल्क। तिनीहरूको न्यूजलेटर सुविधा सक्षम गर्नुहोस् र तपाईंको साईन अप फारम कोड समात्नुहोस् तपाईंको आफ्नै साइटमा समावेश गर्नका लागि।
पुश सूचनाहरू - तपाईंको नयाँ सामग्रीको फिड सब्स्क्राइबरहरूलाई सूचित गर्न PubSubHubbub मार्फत सक्रिय पुश सूचनाहरू।
सामग्री अनुकूलन - एक शीर्षक र लोगो थप्नुहोस्, तपाईंको सामग्री काट्नुहोस्, थप पढ्नको पाठ परिमार्जन गर्नुहोस्, लेखहरूको संख्या समायोजित गर्नुहोस्।
सुरक्षित प्रमाणपत्र - वितरण अधिकतम गर्न SSL को प्रवर्तन।
गुगल एनालिटिक्स एकीकरण - स्वचालित UTM ट्र्याकिंग जब फिड पाठकहरू तपाईंको साइटमा क्लिक गर्छन्।
वैकल्पिक ढाँचाहरू - तपाईंको फिड XML, JSON, वा HTML मा खपत गर्न सकिन्छ।
वर्डप्रेस प्लगइन - यदि तपाईं WordPress मा हुनुहुन्छ भने, उनीहरू चीजहरू अझ सजिलो बनाउन प्लगइन प्रस्ताव गर्छन्!
FeedPress को लागी साइन अप गर्नुहोस्
नोट: मैले यसका लागि एक सम्बद्ध URL समावेश गरेको छु फिडप्रेस - र प्रो प्लेटफर्म सिफारिश!
टैग: वैकल्पिकअनुप्रयोग आरएसएस xMLफिडबर्नरबाट फिडप्रेसमा रूपान्तरण गर्नुहोस्फिडफिड आइकनफिडबर्नरfeedlyफीडप्रेसफिडका लागि हेडर ट्यागकसरी तपाइँको फिडमा एक प्रतिलिपि अधिकार जोड्नेसामाजिकमा कसरी प्रकाशित गर्नेjson फिडआरएसएस फीडRSS आइकनसामाजिकमा आरएसएसआरएसएस एक्सएमएलsb RSS फिड प्लस प्लगइनWordPressWordPress प्लगइन
एरोलिडेस: यस क्रोम प्लगइनको साथ सम्भावित ईमेल ठेगानाहरू पहिचान गर्नुहोस्